Bilyaneer saddex canug ku waayay weerarradii Sri Lanka - BBC News Somali
Bilyaneer saddex canug ku waayay weerarradii Sri Lanka
23 Abriil 2019
Muslimiinta iyo Buudistaha dalka Sri Lanka oo dagaallamay
"Waxaa nasiib darro ah inaan xaqiijinay wararka ku aaddan geerida carruurta," ayuu yiri afhayeen u hadlay dukaamada Bestseller oo email ugu soo jawaabay BBC. "Waxaan idin ka codsaneynaa inaad ixtiraamtaan qoyska, faahfaahin intaa dheerna idin ma siin karno." ayuu intaa raaciyay.
Waxaa la xaqiijiyay in 290 qof ay ku dhinteen qaraxyadii sideeda ahaa ee Axadii lala beegsaday kaniisadaha iyo huteellada lagu raaxaysto ee Sri Lanka. Booliska ayaa xiray 24 qof, balse ma jirto cid sheegtay mas'uuliyadda weerarradaasi.
Mas'uuliyiinta ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in 36 qof oo ajaaniib ah ay kamid yihiin dadka dhintay, kuwaasoo intooda badan aan weli meydadkooda la aqoonsan.
Laba qof oo Australia u dhashay, sida uu sheegay ra'iisal wasaare Scott Morrison